Anyanwụ ▷ ver Discover Online ▷ ➡️
Are nọ n’ebe kwesịrị ekwesị n’oge kwesịrị ekwesị.
Ihe kaadị pụtara "Anyanwụ"
Anyanwụ kaadị bụ ihe gbasara onwe gị - onye ị bụ na otu ị si azụlite àgwà na omume gị. Mgbawa nke Sun bụ ebe enwere ike ịchọta ọdịdị nke mmadụ na ahụike na nchekwa.. A na-ewepụ njedebe nke oge na ohere; nkpuru obi na-enye ume ọhụrụ ma chebe nwa oge site na ọgba aghara n'èzí mgbidi ubi. N'okpuru ìhè anyanwụ, ndụ na-enwetaghachi ịdị mma mbụ ya, eziokwu na ịma mma ya. Ọ bụrụ na egosiri mmadụ na kaadị a, ọ na-egosipụtakarị mmadụ ka ọ bụrụ chi.
Mgbe egosiri mmadụ abụọ, ihe oyiyi ahụ na-egosi mkpebi nke esemokwu dị n'etiti ndị na-emegide ya na ọkwa niile. Ọ dị ka a ga-asị na kaadị a kwuru, sị: "Ị nweghị ike ime ihe ọjọọ ọ bụla, ọ bụ maka ihe kacha mma".
Mee ka ìhè gị nwuo. Tụkwasị obi n'ike dị nsọ nke ọdịdị gị mbụ.
Kaadi Anyanwu na-adụ gị ọdụ ka ị nwee ntụkwasị obi na chi gị. Tụfuo nhazi ọ bụla nke na-egbochi gị ịbụ eziokwu nke onwe gị. Gbanye n'eziokwu nke zuru oke ma kpughee ebumnobi gị na ụkpụrụ gị. Ozugbo emere nke a, ị gakwaghị enye ndị na-akatọ gị na ndị ihere gị ikike. Gbado anya na nke oma na nke mere eme. Brightdị ezigbo mma gị nwere ike ịbụ ìhè nye ndị ọzọ ma ọ bụrụ na ị na oru ngo na-enweghị artifice.